Sellics Benchmarker: Sida loo Beenchmarking Account Advertising Amazon | Martech Zone
Talaado, Febraayo 15, 2022 Talaado, Febraayo 15, 2022 Douglas Karr
Waxaa jira marar badan oo aan la yaabno, suuqley ahaan, sida ay u kharash gareeyaan xayeysiiskeena marka la barbardhigo kuwa kale ee xayeysiiya warshadeena ama kanaalka gaarka ah. Nidaamyada bartilmaameedka waxaa loo qaabeeyey sababtan - oo Sellics waxay haysataa warbixin sal-dhig bilaash ah oo dhammaystiran Amazon Advertising Account si loo barbar dhigo waxqabadkaaga kuwa kale.
Xayeysiinta Amazon waxay bixisaa dariiqooyin loogu talagalay suuqleyda si loo wanaajiyo muuqaalka macaamiisha si ay u ogaadaan, u baaraan, una dukaameystaan ​​alaabada iyo noocyada. Xayeysiisyada dijitaalka ah ee Amazon waxay noqon karaan isku-darka qoraalka, sawirka, ama fiidiyowga, waxayna ka muuqdaan meel kasta oo laga soo bilaabo websaydhada illaa warbaahinta bulshada iyo waxyaabaha la sii daayo
Xayeysiinta Amazon waxay siisaa xulashooyin fara badan xayeysiinta, oo ay ku jiraan:
Noocyada La Isboonsiiyey - xayeysiiska kharashka-gujinta (CPC) ee muujiya astaanta astaantaada, cinwaan gaar ah, iyo badeecooyin badan. Xayeysiisyadan ayaa ka muuqda natiijooyinka wax iibsiga ee khuseeya waxayna gacan ka geysanayaan sidii loo ogaan lahaa helitaanka sumaddaada dhexdeeda macaamiisha wax ka iibsaneysa alaabada adiga oo kale ah
Waxyaabaha Saarida ah - xayeysiiska kharashka-gujinta (CPC) ee dhiirrigeliya liistada alaabada shaqsiyeed ee Amazon. Badeecadaha la kafaala qaaday waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta muuqaalka alaabada shaqsiyeed xayeysiiska ka muuqda natiijooyinka raadinta iyo boggaga wax soo saarka
Display kafaala - xalka xayeysiinta soo bandhigida is-adeegga ee kaa caawinaya inaad ku kobciso meheraddaada iyo sumcaddaada Amazon adoo ka qayb qaadanaya dukaamaysatada safarka iibsiga, iyo ka baxsan Amazon
Astaamaha Amazon Ad
Si aad uga gudubto tartanka, waxaad u baahan tahay inaad fahanto. Tanina waa waxa ka dhigaya aaladda Sellics Benchmarker ka fiican wax kasta oo kale oo suuqa ah: way yeeli doontaa ku dheji waxqabadkaaga macnaha guud oo ku siiya aragtiyo la taaban karo si ay kaaga dhigaan xayeysiiye faa'iido badan oo Amazon ah. The Sellics Benchmarker wuxuu falanqeynayaa waxqabadkaaga Wax soo saarka Sponsored, Brands Sponsored, and Disonsored Display oo wuxuu ku tusayaa si sax ah meesha aad wax weyn ka qabanayso iyo halka aad ku horumarin karto.
Qiyaasaha cabbiraadda warbixinnada aasaasiga ah ee la barbardhigay waa:
Foomamka Xayeysiinta La Isboonsiiyey: Ma isticmaashaa dhammaan qaababka saxda ah ee ay Amazon bixiso? Mid waliba wuxuu leeyahay xeelado iyo fursado u gaar ah. Falanqee Badeecadaha La Isboonsar Gareeyay, Noocyada La Isboonsar Gareeyay & Soo Bandhigidda Isboonsar
Dhibco Faahfaahsan: Fahmaan haddii aad ka tirsantahay 20% - ama hoose
Isbarbar dhig qiimaha xayeysiinta ee iibka (ACOS): Waa maxay boqolkiiba iibka tooska ah ee aad ka sameysay ololeyaasha xayeysiiska ah ee la kafaala qaaday marka loo barbardhigo xayeysiiyaha dhexdhexaadka ah? Adiguba ma tahay muxaafid? Faham dhaqdhaqaaqa firfircoonaanta ee qaybtaada
Qiimaynta Qiimahaaga Dhagsi kasta (CPC) Immisa ayey dadka kale ku bixinayaan isla gujintooda? Baro sida loo helo dalabka saxda ah
Ku Kordhi Qiimaha Riix-Gaarkaada (CTR): Qaababkaaga xayeysiiska ahi miyey ka fiican yihiin suuqa? Haddii kale, baro sida loo kordhiyo fursadaha helitaanka guji
Hagaajinta Heerka Beddelka Amazon (CVR:: Si dhakhso leh ayey macaamiisha u dhammaystirayaan ficillo gaar ah markay gujinayaan xayeysiiska. Alaabtaadu ma ka iibsan badan tahay kuwa kale? Baro sida loo garaaco suuqa & qancinta macaamiisha
Iyada oo ku saleysan xogta ka dhigan $2.5B dakhliga xayeysiiska ee 170,000 oo alaab ah iyo 20,000 oo qaybood oo badeecad ah, Sellics Benchmarker waa qalabka waxqabadka xayeysiiska ugu awooda badan suuqa. Waana bilaash. Goob kasta oo suuq ah, warshado, koox qaabaysan waxa ku jira ugu yaraan 20 nooc oo gaar ah. Celcelis ahaan yihiin tirooyin farsamo dhexdhexaad ah si loogu xisaabtamo kuwa ka baxsan.
Tixraac Akoonkaaga Xayeysiinta ee Amazon
Ku Bilawga Warbixinta Benchmarker Sellics
Marka aad codsigaga geliso Websaydhka Sellics, waxaad heli doontaa warbixintaada bilaashka ah 24 saacadood gudahood. Markaad furto warbixinta, waxaad arki doontaa calaamada waxqabadka oo ku taal geeska midig ee sare oo ku siinaya dhibcaha xisaabta guud. Isla markiiba, waxaad helaysaa dulmar weyn oo ku saabsan sida aad tahay iyo waxaad tahay awoodda koritaanka waa.
Calaamadaha kala duwan ayaa ka tarjumaya heerka guud ee akoonkaaga sida soo socota:
Platinum: 10% ugu sarreeya asxaabta
Dahab: 20% ugu sarreeya asxaabta
Silver: 50% ugu sarreeya asxaabta
Bronze: Hoosta 50% ee asxaabta.
Tixraac PRO: U isticmaal badhanka wacitaanka buugga si aad ula sheekeysato bilaash ah mid ka mid ah khubarada xayeysiiska Amazon Sellics. Waxay kaa caawin karaan inaad tarjumto Sellics Benchmarker ka warbixi ama kuu sheego wax badan oo ku saabsan sida aad u isticmaali karto Sellics si aad u wanaajiso ololahaaga xayaysiinta.
Hoosta waxa aad ka heli doontaa qaybta kooban, kaas oo soo bandhigaya waxqabadkaaga guud iyo tilmaamayaasha waxqabadka furaha ee ugu wanaagsan uguna xun (KPIs) marka la eego. Waxaad isticmaali kartaa badhanka midigta sare ku yaal si aad u dooratid inaad jeceshahay inaad barbar dhigto waxqabadkaaga bartilmaameedyada khuseeya ama wax qabadka bishii hore.
Faham isbeddellada ku jira KPI-gaaga Xayeysiiska Amazon
KPI-yada heerka sare ah sida ACoS waxaa saameeya arrimo badan oo kala duwan, way adkaan kartaa in la ogaado waxa keenaya isbeddelada waxqabadka.
Funnel wax qabadku waa mid aad u fiican sababtoo ah
Waxaad ku arki kartaa dhammaan cabbiradaada hal meel.
Maqaarka ayaa muujinaya sida mitir kasta oo arrimood u galaan KPI-gaaga, taasoo kuu oggolaanaysa inaad si fudud u aqoonsato waxa isbeddellada keenaya.
Tusaalaha warbixinta demo ee kor ku xusan, waxaad arki kartaa in ACoS ay kor u kacday sababtoo ah kharashka xayeysiinta ayaa kordhay in ka badan iibka xayeysiiska. Intaa waxaa dheer, waxaan arki karaa in hoos u dhac ku yimid heerka beddelka iyo celceliska qiimaha nidaamka (AOV) iibka xayaysiiska oo dib loo dhigay.
Hubi inaad gujiso Isbeddellada Bisha-Bisha Ka Badan badhanka hoose ee godka si aad ula socoto waxqabadkaaga wakhti ka dib.
Ku Aqoonso Alaabta Amazon Saamaynta Ugu Wayn (Togan ama Negative)
Iyada oo la Saamaynta Darawalka, waxaad si dhakhso ah u arki kartaa alaabooyinka ka qaybqaata inta ugu badan-labadaba si togan (cagaaran) iyo si taban (casaan) - isbeddellada waxqabadkaaga bisha-dhaafka ah ee dhammaan KPI-yada muhiimka ah, oo ay ku jiraan kharashka xayeysiiska iyo ACoS.
Falanqaynta Darawalka Saamaynta ayaa ka jawaabi doonta su'aalaha muhiimka ah, sida:
Waa maxay sababta Iibka Xayeysiiskaygu u kordhay/hoos u dhacay?
Alaabhee ayaa keenay hoos u dhac/kor u kaca ACoS, iibka xayaysiiska?
Halkee buu ka kordhay CPC-gayga bishii hore?
Isticmaalka mid ka mid ah saddexda jaantus ee qalabkan (waterfall, treemap, ama miiska alaabta), waxaad si degdeg ah oo aan dadaal lahayn u aqoonsan kartaa hawl-wadeennadaada ugu xooggan iyo fursadahaaga ugu weyn ee hagaajinta.
Tani waa qalab lagama maarmaan u ah xayeysiiye kasta!
U hel 100-ka ugu sarreeya ee ASIN-gaaga
Qaybta Falanqaynta Alaabta ayaa ah qaybta aan ugu jeclahay qalabka sababtoo ah waxay ku siinaysaa xogta waxqabadka heerka ASIN. Si la mid ah funnel-ka waxqabadka, naqshaddu waxay awood kuu siinaysaa inaad si fudud u sameyso falanqaynta xoogga leh, iyo tan ugu muhiimsan, way fududahay in la fahmo.
Marka hore, waxaan jeclahay in aan isticmaalo shaandheeyeyaashu badhanka si loo shaandheeyo qadarka ugu yar ee kharashka xayeysiiska. Sidan, waan ogahay inaan wanaajinayo alaabooyinka saameyn weyn ku leh waxqabadka guud.
Kadibna alaabada soo hartay, waxaan fiiriyaa wareegyada midabka leh ee ku xiga KPIs si aan u arko inay ka sarreeyaan ama ka hooseeyaan heerka heerka hoose. Habka midabaynta ayaa u shaqeeya sida soo socota:
Cagaaran: waxaad ku jirtaa 40% ugu sarreeya = shaqo fiican
Jaalle: waxaad ku jirtaa bartamaha 20% = waxaad u baahan tahay inaad horumariso
Casaan: waxaad ku jirtaa meesha ugu hooseysa 40% = waxaad haysataa fursado waaweyn oo korriin ah.
Sababtoo ah ACoS asal ahaan waxaa lagu go'aamiyaa qiimaha gujinta (CTR), heerka beddelka (CVR), iyo qiimaha halkii gujiba (CPC), badiyaa waxaan raadiyaa dhibco guduudan iyo ka dib dhibco jaale ah oo ku xiga CTR, CVR, ama CPC, ka dibna bilaaba wanaajinta kuwa leh Software-ka Sellics.
Iyadoo aanad u baahnayn software-ka Sellics Hel warbixintaada Sellics Benchmarker ee bilaashka ah, xaqiiqdii waan ku talinayaa! Waxay leeyihiin automation iyo astaamo AI oo ka faa'iideysta awoodda xogta weyn si ay kuugu sameeyaan dhammaan qaadista culus adiga.
Xeeladda Ololaha Heerka Sare
Intarneedka waxaa ka buuxa talooyin ku saabsan sida loo wanaajiyo KPI-gaaga, laakiin dad aad u tiro yar ayaa geli doona fikradda sida aad u qaabayn lahayd ololahaaga xayaysiisyada. Haddii aanad iyaga siin lacag badan, taasi waa.
Tani waa meel kale oo ka mid ah Tusmada ugu hooseysa ee Sellics Benchmarker waxay bixisaa qiimo cajiib ah. Qaybta Qaab dhismeedka Koontadu waxay ku siinaysaa aragtida guud ee sida xisaabtaada loo dajiyay iyo wuxuu barbar dhigayaa xisaabaadka kale ee waxqabadkoodu sarreeyo.
Qalabku wuxuu xisaabiyaa saddex cabbir oo kala duwan: kooxaha xayaysiiska/ololaha, ASINs/ololaha, iyo ereyada muhiimka ah/ololaha. Kadibna waxay ku siinaysaa "darajooyin" si sahlan loo akhriyi karo. Nidaamka darajaynta wuxuu u shaqeeyaa sida soo socota:
jaale: ka fiirso inaad isbedel sameyso
casaan: waxay u badan tahay inaad u baahan tahay inaad dib u habeyn ku sameyso ololahaaga.
Ilaa aad tahay xayaysiiye haysta in ka badan $10,000 oo xayaysiis ah bishii, waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha guud ee qalabku ku talinayo.
Kooxaha xayaysiiska/Ololaha: Haysashada kooxo xayeysiis ah olole kasta waxay ku siin doontaa koontarool badan oo miisaaniyadaada ah.
ASIN-yada/Kooxda Xayeysiisyada La Xayeysiiyay: Inta badan xayaysiiyayaasha, ilaa 5 ASIN oo la xayaysiiyo koox kasta ayaa u fiicnaan doonta.
Erayada Furaha/Kooxda Xayeysiiska Inta badan xayaysiiyayaasha, inta u dhaxaysa 5 iyo 20 ereyada muhiimka ah koox kasta ayaa si fiican u shaqayn doona.
Qaabka Xayeysiiska Amazon Deep-Dive
Xayeysiyayasha maamula Alaabooyinka La Kafilo iyo Bandhiga La Kafilo, qaabka xayaysisku wuxuu u badan yahay mid ka mid ah qaybaha ugu fiican Warbixinta Sellics Benchmarker.
Garaafku waxa uu soo bandhigaa qaybinta xayaysiiskayga marka la barbar dhigo heerka cabbirka, si aan si sahal ah u arko haddii ay tahay in aan ku fikiro in aan wax badan ama ka yar maalgeliyo nooca xayeysiiska.
Hoos u dhaadhac, waxaad heli kartaa heerka-qaab-qaabaynta darajooyinka KPI iyo Benchmarks. Haddii aad gujiso badhanka "+" ee ku xiga mid ka mid ah KPI-yada waxaad awoodi doontaa inaad samayso falanqaynta heerka ASIN ee ASIN-yada aad ku xayaysiiso Alaabooyinka la Kafilo.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu waaweyn ee Sellics Benchmarker waa in ka dib marka aad saxiixdo warbixintaada ugu horreysa, waxaad heli doontaa warbixin 30 maalmood kasta oo ka kooban xogta bishii hore. Sidan, waxaad sii wadi kartaa inaad hagaajiso oo aad hagaajiso akoonkaaga si aad u gaarto yoolalka xayaysiinta Amazon.
Qiimaha ay bixiso qalabkani waa mid aad u weyn. Hel warbixintaada Sellics Benchmarker ee bilaashka ah maanta si aad xayaysiiskaaga u gaadhsiiso heerka xiga oo aad uga adkaato tartanka.
Afeef: Anigu waxaan ku xidhan ahay Sellikada.
Tags: xayeysiinta amazonNoocyada Amazon SponsoredAlaabooyinka ay kafaala qaadayso Amazoniibinta